खप्तड छन्नाको किर्ते काण्ड : सिडिओ भन्छन् “कार्वाहीका लागी प्रक्रिया अघी बढाइ सक्यौ” (भिडियाे सहित‌) - साइपाल खबर
२९ असार २०७८, मंगलवार ११:२८ साइपाल खबरLeaveaComment on खप्तड छन्नाको किर्ते काण्ड : सिडिओ भन्छन् “कार्वाहीका लागी प्रक्रिया अघी बढाइ सक्यौ” (भिडियाे सहित‌)
बझाङ । खप्तड छान्ना गाँउपालिकाले किर्ते योजना बनाई करिव १७ लाख बराबरको भुक्तानी दिएको भन्ने समाचार बाहिरीएपछी उक्त घटनाको अध्ययन सुरु भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङको टोलीले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकाएको छ । गाँउपालिकामा आएको रकमलाई दुरुपयोग गर्न खोजने कर्मचारी र गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधीहरुले गरेको किर्ते योजना भएको हो । रकम दुरुपयोग गर्ने खोजेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले बताउनु भएको छ ।
गाँउपालिकाले किर्ते योजना तयार पारि करव १७ लाख रुपैया भुक्तनी दिएको भन्ने समाचार साइपाल खवरमा प्रकासित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बझाङले त्यसमाथी अध्यन थालेको थियो । प्रारम्भिक अध्धयनबाट किर्ते कागजात खडा गरि रकम भुक्तानी दिएको विषय खुल्न आएको जिल्ला प्रशाशन कार्यालयले जनाएको छ । खप्तड छान्ना गाउ“पालिकाले वाड नं. ४ को पसलवगर सिल्का घट्ट सिचाई कुलो निमार्ण नामको नक्कली योजना बनाएर १४ लाख ८ हजार ८१७ रुपैया भुक्तानी दिएको थियो । तर उक्त योजना यो भन्दा अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बनेको र सो योजनाको रकम भुक्तानी पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा नै भइसकेको छ प्रजिअले भने “कामको प्रकृती हेर्दा कार्वाहीको योग्य छ । प्रारम्भिक अनुसन्धान सकेर आफुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महेनद्रनगर पठाइने छ ।”
यस घटनासँग सम्बन्धित समाचारहरु
“खप्तड छान्ना गाउ“पालिकाले वाड नं. ४ को पसलवगर सिल्का घट्ट सिचाई कुलो निमार्ण नामको नक्कली योजना बनाएर १४ लाख ८ हजार ८१७ रुपैया भुक्तानी दिएको थियो । पालिकाले योजना भुक्तानी गदाए समिति मात्रै नभएर किर्ते डिजाइन स्टेमेट र प्राविधिक प्रतिवेदन, किर्ते अनुगमन प्रतिवेदन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन बनाएर पेश गरेको पाइएको छ” प्रजिअ अधिकारीले भने ।
खप्तड छान्ना किर्ते योजनाको नालीबेली : कसरी समातियो चेक ?
गाँउपालिकाले जुन कृर्षि भवनको माथिल्लो तला निर्माणका लागी उपभोक्ता समिती मार्फत रकम दिनका लागी यो बाटो अपनाइएको भनेर भनेको छ त्यो पुष्टी हुने कुनै आधार छैनन् । उक्त समिती मार्फत रकम भवन निर्माण गर्ने ठेकेदारलाई दिन नमिल्ने भएको र निर्माण गरिएको भवन ४० लाखमा निर्माण सम्झौता भई रकम भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ । “काम कार्वाही योग्य नै छ । मैले कार्वाहीका लागी अख्तियारमा पठाएको छु । बाँकी अख्तियारले गर्ने छ” प्रजिअ “अधिकारीले भने योजना सम्पन्न भएको भनेर वडा अध्यक्षले हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै गाँउपालिका अध्यक्ष बर्क रोकायाले योजनाको प्रतिवेदनमा समेत हस्ताक्षर गरेको पाइएकाले हुँदै भनएको योजनालाई फरफाक गरी भुक्तानी दिने नियत ठिक देखिएको छैन् ।”
१२ भाद्र २०७८, शनिबार २०:३६ साइपाल खबर
कर्मचारीले ठगे जनप्रतिनिधि
११ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:०४ साइपाल खबर
३१ श्रावण २०७८, आईतवार २०:४४ साइपाल खबर